Coronavirus sy hetsika ampahibemaso, 84% amin'ny karamanao no homena anao.
Posted by Tranquillus | Mar 28, 2020 | Mipetraka sy miasa any Frantsa
Noho ny valanaretina coronavirus dia nanapa-kevitra ny hiasa vetivety ny mpampiasa anao. Amin'ny farany, tombanana fa mpiasa an-tapitrisany mahery no voakasik'ity rafitra ity. Inona no tsy fananana asa ara-teknika, inona no dingana tokony hatao, iza ary rahoviana ianao no handeha mandoa anao ? Ny valiny rehetra amin'ny fanontanianao.
Inona no atao amin'ny tsy fananana asa na teknika?
Raha hiresaka momba ny tsy fisian'ny asa amin'ny lafiny ara-teknika na teknika dia ampiasaina ankehitriny. Amin'ny maha-fitsipika ankapobeny, dia ho an'ny orinasa iray miatrika setera na fanelingelenana lehibe amin'ny asany. Mandoa onitra ho an'ny mpiasa ao aminy izay havan'ny fanjakana. Izany dia manampy amin'ny fisorohana ny fialam-boly.
Ao anatin'ity rafitra ity ary ity, na inona na inona sampanao matihanina, no hahazoanao tambiny:
84% amin'ny karamanao ary 70% amin'ny karamanao.
100% ny karamanao raha karama farany ambany na fampiofanana (CDD na CDI) ianao.
Miaraka amin'ny 4607,82 euro farafaharatsiny raha mihoatra ny tokonam-baravaran'ny 4,5 SMIC ianao.
Ao amin'ny ny mpampiasa manaova fangatahana amin'ny Direction régionale ho an'ny orinasa, fifaninanana, fanjifana, asa ary asa. Mba hanampiana ireo orinasa amin'izao vanim-potoana izao dia nomena 30 andro izy ireo handefa ny fangatahany. Raha ny momba anao dia hahazo ny slip-nao sy ny karamanao amin'ny fomba mahazatra ianao. Mandritra io vanim-potoana tsy an'asa io dia hiato ny fifanarahan'ny asa ataonao fa tsy ho tapaka. Izany dia milaza fa hifandray amin'ny orinasanao ianao, ary noho izany dia voahilika tsy hiasa ho an'ny mpifaninana iray ohatra ianao. Betsaka ny fifanekena momba ny asa no manana an'io fehezan-dalàna tsy fifaninanana io. Tsy voarara tsy hiasa ianao, fa mila mampahafantatra ny mpampiasa anao.
HAMAKY Ahoana ny fiasan'ny ora fanampiny
Azontsika atao ny manery anao hangataka ravina?
Mandritra ny fotoana voatokana ary manaraka ny fifanarahana orinasa miaraka amin'ireo sendika sy ny fivorian'ny komity ara-tsosialy sy toekarena. Ny orinasanao dia mety hampandeha anao 6 andro tsy fiasana voaloa indrindra. Ny vanim-potoana fampandrenesana, izay mazàna iray volana dia esorina noho ny tranga tsy fahita iainan'i Frantsa. Hanaraka ny lojika mitovy ihany koa ny RTT.
Raha mikasa ny handeha amin'ny fialan-tsasatra ianao tsy ho ela. Mety hieritreritra ny hanemotra ny fialanao ianao. Aza adino fa tsy misy manery ny lehibenao hanova ny datin'ny fialan-tsasatrao. Mifanohitra amin'izany, mety hila anao izy rehefa tapitra ny krizy ary noho izany dia azo antoka ny hanemotra ny fialan-tsasatrao.
Asa miasa an-tena, mpiasa tsy maharitra, mpiasa an-trano any an-trano.
Ho an'ireo miasa tena, kasaina hatao ny famoronana tahiry firaisankina. Ity rafitra ity dia manome vola ho an'ny fanampiana 1500 euro isam-bolana. Ireo izay very famindram-bola na nijanona ny hetsika rehetra dia afaka mandray soa amin'izany.
mpiasa Mahazo tombony amin'ny tsy fananana asa ny mpiasa tsy maharitra toa ny mpiasa amin'ny fifanarahana maharitra na maharitra. Ny toetoetran'ny fifaneken'izy ireo dia tsy misy fiantraikany amin'ny zon'izy ireo hahazoany tombony amin'ny rafitra.
Raha miasa olona, ​​mpitaiza, mpikarakara tokantrano na hafa ianao. Fitaovana azo ampitahaina amin'ny tsy an'asa ampahany dia hamela anao hahazo 80% amin'ny fandoavanao mahazatra. Handoa anao ny mpampiasa anao ary haverina amin'ny fanjakana izy io aorian'izay.
Coronavirus sy hetsika ampahibemaso, 84% amin'ny karamanao no homena anao. May 12th, 2020Tranquillus
Teo alohaIza no mahazo tombony amin'ny fiatoana amin'ny asa mifandraika amin'ny fanakatonana ireo sekoly? Raha manan-jo handoa azy ianao, manao ahoana ny habetsaky ny fotoana sy ny tambin-karama?
manarakaMianara finaritra amin'ny sehatra e-fianarana ety amin'ny SKILLEOS